Barcelona oo ka adkaatay Kooxda Manchester United iyo Juventus oo bareejo la dhaafi weyday Ajax +Sawiro – Gool FM
Bashiir April 10, 2019
( Yurub ) 10 Abriil 2019 Kooxda Barcelona ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay dhigeeda Kooxda Manchester United kulan ka tirsan lugta koowaad ee wareega sideed dhamaadka tartanka Champions League .
Kulan ciyaareedka qeebtiisa Koowaad oo ahaa mid aad u xiiso badan waxaa lagu kala nastay 1-0 oo ay ku hogaamineyso Kooxda Barcelona oo marti ku aheyd Old Traford.
Kooxda Barcelona oo u muuqatay mid ka wanaagsan United qeebtii hore ee ciyaarta ayaa heshay goolka koowaad kaddib kubad kam aheyd oo uu iska dhaliyey Luka Show daqiiqadii 17-aad ee ciyaarta .
Barcelona ayaa sameesay isku dayo kale oo gool loo filan karay balse uma suura galin in jaanisyadaas ay heleen gool u badalaan , geesta kale Manchester waxaa soo maray jaanisyo fara ku tirs wallow midna aysan ka faa’ideysan .
Ugu dambeen kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa ku idlaaday 1-0 oo ay ku hogaamineyso Kooxda Barcelona oo ka wanaagsaneed dhigeeda United.
Waqti nasiino iyo talo soo qaadasho kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta oo aheyd mid ka xiiso badan qeebtii hor.
United ayaa ku soo gashay dar dar xoogan qeebtii dambe ee ciyaarta iyaga oona helay fursadihii ugu badnaa ee ciyaarta balse daafacyada kooxda Barcelona ayaa sameeyey difaacasho wanaagsan.
Isku day walbo oo ay sameyeen wiilasha Kooxda Manchester waxa ay ku fashilmeen in ay helaan goolka bareejada ee ciyaarta , ugu dambeen kulanka ayaana ku idlaaday 1-0 oo ay ku badiyeen Kooxda Barcelona .
Dhinaca kale kulan ciyareedkii u dhexeeyey Kooxaha Ajax iyo Juventus ayaa ku soo dhamaaday 1-1 kooxda reer Holand ayaa sameesay soo laabasho qurux badan .
Juventus oo goolka la hormartay waxaa u dhaliyey laacibkooda Ronaldo oo dib ugu soo laabtay Kooxda balse qeebtii dambe ee ciyaarta Kooxd Ajax ayaa la timid goolka bareejada ee ciyaarta daqiiqadii 46-aad ee ciyaarta waxaana goolka u dhaliyey Neres .
HORDHAC : Slavia Prague VS Chelsea ? Xogta kulanka iyo xaqiiqooyinka laga diwaan giliyey